Ngakho ngiyahlanza ukungapheleli kwesikhumba nge-makeup
Isikhumba esiphelele ngaso sonke isikhathi kungenzeka? Yebo, uma usebenzisa i-concealer kahle. Ikhambi eliyisimangaliso lizobhekana nemibimbi eyomile, izibhamu ngaphansi kwamehlo, ukuguqulwa kwegazi, ukubomvu nokuqhuma. Kulo qoqo - imikhiqizo emithathu ejabulela ukuhlonishwa kahle kwamantombazane.
I-concealer engabizi kakhulu yokwenza ikhaya
Ukukhanya okungenamanzi Okubonisa ukucwenga emgqeni we-BeYu ukufakela umxhwele ujabulise nokusebenza kwawo okuningi - abakwazi ukulungisa kuphela indawo ngaphansi kwamehlo, kepha futhi bayisebenzise njengendlela yokuqala yamajwabu amehlo kanye ne-highlighter eyinkimbinkimbi. Ukuthungwa okukhanyayo kusatshalaliswa ngokufanayo esikhumbeni, ukulungisa ithoni yayo - ukucasha okukhulu okufihlekile kungafihla, kepha kuzosiza ukuqeda izimpawu zokukhathala futhi kuzovuselela ubuso.
BeYu Light Ukuzindla: ruble 560 on wildberries.ru
I-concealer ye-Liquid ekhoneni le-True Match Touche Magique Concealer ingenye yezimpahla ezithengisa kakhulu ze-brand L'Oreal, futhi ngesizathu esihle. I-emulsion isetshenzisiwe nge-vitamin extracts, i-glycerin ne-particle-refining-particles - ayisusi nje kuphela imibuthano emnyama ngaphansi kwamehlo kanye ne-post-acne, kodwa iphinde ivule isikhumba ngesembozo esikhanyayo. I-Fluid iphikisana ngokugcwele nomsebenzi we-highlighter, ingafakwa ezisekelweni ze-tonal, izilungisi kanye nama-crams ngosuku.
I-Oreal True Match Touche Magic: Ama-ruble angama-665 ku-pudra.ru
Umthengisi Max Factor
Ukulinganisa i-Mastertouch concealer ngumkhiqizo ophumelelayo ovela ku-Max Factor, onokulinganisela kwezinga lentengo. I-emulsion ine-masking effect emihle, evumela ukukhipha imibuthano emnyama, ukuvuvukala, ukujula nokuqina-ngisho nasesikhumba esinamafutha noma esinenkinga. Icala elihle nomfakisicelo kuyinzuzo ecacile yomkhiqizo: ungathathwa nawe futhi, uma kunesidingo, ulungiswe nge-makeup.
I-Max Factor Mastertouch: ama-ruble angu-380 ku-Rive Gauche
Owesifazane oletha injabulo
Isicelo se-Vitamin E eCosmetology
Indlela yokuzikhandla ngokushesha
Yini eheha owesilisa kubantu besifazane
Ingabe kuyasiza izinwele ukusika ngezikhali ezishisayo
Ubuhle ezandleni zakho: izimfihlo ezivela Kim Kardashian
Ama-pancake omnandi anenhliziyo enhle: zokupheka zakudala nezokuqala zama-pancake
Amanzi ashisayo avela kubakhiqizi abahlukene: umehluko kanye nezindlela zokusebenzisa
Isaladi le-mushroom neqanda
Inkukhu iqoqa nge ushizi
Amazambane aqoshwe kuhhavini
Izinkinga zemfundo yobuntu bokudala
Ama-sea bass kuhhavini
Umngane omuhle kunabo bonke u-Masha Efrosinina
I-Psoriasis, izindlela zomuntu zokwelashwa
Indlela yokupheka okusanhlamvu ngezinzuzo zezempilo eziphezulu
Inkinobho enhle - indlela yokufinyelela ngayo
U-Aisa Anokhina utshele impi ... izinwele